Dowladda Imaaraadka oo soo kiraysatay Khubaro dhanka la dagaalanka burcad badeeda ah. – Radio Daljir
Dowladda Imaaraadka oo soo kiraysatay Khubaro dhanka la dagaalanka burcad badeeda ah.
Dubia, June 29 – Wadanka isutaga imaaraadka carabta ayaa ku casumay wadankiisa ciidamo khubaro ah oo qaabilsan la dagaalamka budhcad badeedda, waxana ay tababar u samaynayaan ciidamada imaaraadka iyagoo tabaabrkaana looga goleeyahay sidoo loo xoojinlahaa dadaalka lagula jiro kooxaha budhcad badeedda ah ee isasoo taraya.
10 sarkaal oo Koonfur Kuuriyaan ah ayaa dalka imaaraadka imanya badhtamaha bisha July iyadoo 130 askari oo reer Koonfur Kuuriya ahna ay horay ugu sugnaayeenba magaalada Alcayn ee imaaraadka, waxaana warkaasi xaqiijiyey Col Romano Lee oo ah u qaybsanaha gaashaandhiga ee safaarada Koonfur Kuuriya ee Magaalada caasimada ah ee Abu Dhabi.
Ciidamo si gaar ah u tababaran oo koonfur Kuuriyaan ah ayaa bishii January ee sanadkaan soo furtay markab laga lahaa wadanka Koonfur Kuuriya oo ay afduubeen
kooxo budhcad badeedd ah Somali ah .
Markabkaasi oo lagu magcaabo Samho Jewellery ee la afdubay islamrkaana ay soo furteen ciidamada Koonfur Kuuriya ayaa lasoo badbaadiyey dhamaan shaqaalihii saarnaa inkastoo uu dhaawac soo gaaray Gabtankii markabkaasi.
Ku dhawaaqista imaanshaha ciidamada 10 ah ee Koonfur Kuuriya ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii magaalada Abu Dhabi ay soo gaareen wafdi ka mid ah ciidamada badda ee ee wadanka Turkiga oo doonaya in ay dhoolatus iyo carbis la dagaalanka burcad badeedda ah la sameeyaan ciidamda badda ee imaaraadka.
Labada dale ee Turkiga iyo Koonfur Kuuriya ayaa iyagu ka qaybgalaya hawlgalka wadamada badan ka kooban ee loo yaqaan hawlgalka iskudhafka ee la dagaalanka jirida badda,waxana wadamadaasi roondo ka wadaan biyaha gacanka cadmeed iyo badweynta India.